ကျွန်တော်.အမြင်များ ~ SAI SENG SERK
Home » MYOPINION » ကျွန်တော်.အမြင်များ
သူငယ်ချင်းအပေါင်းတို. မိုင်ဆွန်ခ(မင်္ဂလာပါ) ......
ဒီအတော.အတွင်း ကျွန်တော်. Post မှာ ကျွန်တော်. ပရိသတ်တွေ ခပ်များများ ဒီမိုက ရေစီအကြောင်းလာရေးတာ ကျွန်တော် ဖတ်ရပါတယ်။ဒီအစိုးရဖွဲ.စည်းတဲ. ၂၀၀၈ဖွဲ. စည်းပုံပာာ (The union Construction 2008) ပာာ ဒီမိုကရေစီ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုမှမပါ ဘူး။အစိုးရရဲ. လုပ်ဆောင်မူပေါ်မှာ လိုက်မရူးစမ်းပါနဲ.။ဦးအောင်မင်းစကားတစ်ခုပြော
တာရှိတယ်။ ဦးအောင်မင်းနဲ. ကျွန်တော်.အသိတစ်ယောက်တွေ.ကြတယ် "ခင်ဗျာတို. ဘယ်တော.နောက်ကြောင်း (Flash Back) ပြန်မှာလဲဆိုတော. ကျွန်တော်တို.နောက်ကြောင်းမပြန်ဘူးတဲ. နောက်ကြောင်းပြန်လို.လည်းမရဘူး။နောက်ကြောင်းပြန်ရင် ကျွန်တော်တို. သေသွားမှာ ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ဖြစ်သွားမှာ။ဒီအတိုင်းသွားတာက မျောသွား လို.ရတယ်။နောက်ကြောင်းပြန်သွားရင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ.တွေလည်း စုမိနေပြီ၊ကျွန်တော်တို. အကုန်ဒုက္ခဖြစ်သွားမယ်တဲ.။"သူက ဒီလိုပြောတာ. ကျွန်တော်.အထင်က သူ တို..သဘောက အချိန်ဆွဲမယ် လိမ်မယ် ဒီမိုရေစီအတုနဲ. မျောသွားမှာသေချာတယ်။ အဲဒါကို မသိသေးတဲ.လူက ဒီမိုကရေစီ ဒီမိုကရေစီနဲ. ဒါပေမဲ. ဆန္ဒပြ တာတော.နည်း
နည်း ဒီမိုကရေစီကျတယ် Freedom တော.မဖြစ်ဘူးပေါ.။ဒီမိုကရေစီတကယ်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Construction ပြင်ရမှာခ အဲဒါပြင်မှ တကယ် ထိရောက်မူရှိမယ်လို. ကျွန်တော်ထင်တယ် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပာာ အဓိကကျတဲ.အရာက ဖွဲ.စည်း ပုံ (Construction ) ပဲလို.ကျွန်တော် ထင်တယ်။လူတွေက လိုက်လိုက်ရူးတာ ဒီမို ဒီမိုနဲ.
တကယ်ဒီမိုဖြစ်နေလို.လား ပြုပြင်မူ (Reformer )ဘယ်လောက်ထိရောက်နေသလဲ ဘယ်အဆင်.ထဲရောက်နေပြီလဲ။တကယ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဖြစ်စေချင်ရင် ဖွဲ.စည်းပုံကို ပြင်ရမယ်လို. ကျွန်တော်ꨵ Considered အနေနဲ.ပေါ.နော်။အစိုးရကပြောတာပေါ.နော် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံပာာ စည်းကမ်းပြည်.၀ တဲ.ဒီမိုကရေစီလို.ပြောပြောနေ တာ တကယ်တမ်း သူတို. စည်.ကမ်းပြည်.၀တဲ. ဒီမိုကရေစီသူတိုပေးတဲ. စည်းကမ်း
အာဏာရှင်က ပေးတဲ.စည်းကမ်း အဲဒီစည်းကမ်းပာာ ဒီမိုအတုကြီး မယုံရင် လေ.လာကြည်.လိုက်ပါ Construction of 2008 ကို အစိုးရချတဲ.မူဝါဒ သူတို.ကျင်.သုံးနေတဲ. ဒီမိုကရေစီအတုတွေပဲပြီးတော. ကျွန်တော်တိတ်နားမလည်ဘူး ၂၀၁၃ အကုန် ဗမာ
အစိုးရ President ဦးသိန်းစိန်မိန်.ခွန်းထဲက ပထမပိုင်းနဲ ဒုတိယပိုင်းတော. နားလည် တယ် လက်ခံတယ် ဒါပေမဲ.တတိယပိုင်းကြတော.သိပ်မရှင်းလင်းဘူး နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မူဆိုင်ရာ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်မူများကိုပေါ. အဲဒီတတိယပိုင်းက ဦးသိန်းစိန် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောဘူး။ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော.သူတို.ကမရိုးသားဘူး နောက်ထပ်
ဘာတွေ လိမ်အုံးမလဲမသိဘူး။ပွင်.လင်းမူမရှိဘူး (Transparent) အဲဒါကို သူတို.က ၂၀၁၅ အထိသယ်သွားမှာသေချာတယ်။ဒီအခု ကျင်.သုံးနေတဲ.ဒီမိုပာာ အတု (Fake) ဖြစ်နေမယ်။တိုင်းရင်းသားဆုံးဖြတ်ချက်တွေလဲ ၂၀၁၅ ကိုစောင်.ကြည်.နေကြတယ်ဆို တာ မလွဲဘူးလို. ကျွန်တော်ထင်တယ် အခုဒီမို ကတော. အတုပဲ အတုမှ အတုပဲ အဲဒါ
ကိုလိုက်မရူးပါနဲ. အဲဒါကျွန်တော်.အမြင်ပေါ.နော်။လူတစ်ယောက်နဲ. တစ်ယောက် ထင်မြင်ယူဆမူမှ ဘယ်တူပါ.မလဲ။ပြီးတော. ကျွန်တော်. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြော တယ် လူမျိုး ကြီး မူဝါဒ တိတ်မလုပ်နဲ. ဒီခေတ်ပာာ ဒီမိုကရေစီခေတ် ငါတို.ရှမ်းလူမျိုးလူကြီး President ဖြစ်လာရင် လူမျိုးကြီးတယ် ဘာဘာညာညာပေါ. ပာုတ်ပါတယ် သူပြေ
ာတာလဲ မှန်တယ် လုံးဝ မမှားပါဘူး ကျွန်တော် နည်းနည်းသိပ်မကြိုက်တာ သူပြောနေ တဲ.ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ. စကားပဲ အခုဖြစ်နေတဲ.ပုံနဲ. ဒီမိုကရေစီ စံချိုးမိလို.လား အခုချိန် ထိပဲ ငါတို.နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပါလို. အစိုးရဘယ်နှစ်ခါထုပ်ဖော်ခဲ.လို.လဲ။ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူ သွားနေတဲ.အချိန် ဆိုတဲ.စကားပဲပြောပြောနေတာ။သူတို.စကားအရမ်းအဓိပါယ်ရှိတယ်။သေသေချာချာ နားထောင်ပါ။ရှမ်းလူမျိုး President ဖြစ်လာရင်လို.ပြောရလောက်အောင်လဲ အခု Vice President ဒေါက်တာစိုင်းမောင်ခမ်းကော် ဘာ
တွေ လုပ်ဆောင်ရလို.လဲ (Perform) အဲဒါကို ပဲကြည်.ကြည်.ပါ သူကိုယ်တိုင် Vice President လုပ်သတ်မှတ်ပါတယ်။Political ပိုင်းမှာ သူမပါလာတော.ဘူး။သာသနာရေး Vice President ပဲသူက ရှမ်းလူမျိုးဖြစ်ဖြစ် ဘယ်တိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ် ကြီး
President ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ဒီအခု အုပ်ချုပ်နေတဲ. စစ်အာဏာရှင်တွေရော သမ္မတမ ဖြစ်ချင်ဘူးလား အစိုးရကြီး အာဏာရူးနေသရွှေ.တော. မထင်ပါနဲ. ဘယ်တိုင်းရင်းသား မှ President မဖြစ်နိုင်တော.ဘူး။အဲဒါကြောင်. ဖြစ်နိုင်ရင် Construction ကိုပြင်ရမယ်မပြင်ရင် ၂၀၁၅ကြရင် ဘယ်လိုမှ စစ်မှန်တဲ. Federal မဖြစ်နိုင်ဘူး။စစ်မှန်တဲ. ရွေးကော
က်ပွဲ (Election) လဲဖြစ်လာမှာမပာုတ်ပါဘူးလို. နိဝုန်းချုပ်ရင်းနဲ. အမြဲတမ်း Flash ဖြစ်အောင်နေနေပါ နောက်ထပ် ငါတို.တိုင်းရင်းသား National of race အလိမ်မခံရပါစေနဲ ကိုယ်.လူမျိုး ကိုယ်.ဘာသာ ကိုယ်.သာသနာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါ ကိုယ်.ရိုးရာဝ တ်စားမူကိုလဲ ၀တ်ဆင်ကြပါ ရှက်စရာမပာုတ်ပါဘူး ကိုယ်.ကြောင်. လူအများကိုယ်.လူ
မျိုးအထင်သေးသွားအောင်မလုပ်ပါနဲ. အားလုံးပဲ မိုင်ဆွန်ခ ကျွန်တော် စာရေးတာ အမှားများရှိခဲ.ရင် အားလုံးကိုပဲ ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ်။ခွင်.လွတ်ပေးကြပါ။